प्रत्यक्ष ब्लेक 2
हामी क्यासिनो खेल संसारको शास्त्रीय खेल को रूपमा ब्लेक सन्दर्भमा. इन्टरनेट को आगमन अघि, ब्लेक भूमि आधारित क्यासिनो धेरै लोकप्रिय थियो. इन्टरनेट को आउँदै यो खेल दुनिया मा कहीं कुनै थप पहुँचयोग्य बनाएको छ. इन्टरनेट खेल को प्रसार paradoxically भूमि आधारित खेल को लागि एक नोस्टाल्जिया सिर्जना गरेको छ. अधिकांश मानिसहरू लागि, एक देशमा आधारित क्यासिनो जाँदै लगभग असम्भव छ. यात्रा बारेमा चिन्ता, आवास र यति मा तिनीहरूलाई बन्द scares. खुसीको, NetEnt सही माध्यम खेलाडीहरूलाई को घरमा भूमि आधारित खेल ल्याउन सकेको छ प्रत्यक्ष ब्लेक 2.
प्रत्यक्ष ब्लेक को विकासकर्ता बारे 2
NetEnt एकदम केहि समय को लागि हाम्रो साथ छ. यो सम्म फिर्ता रूपमा लागि वरिपरि भएको छ 1996. यो विकासकर्ता तीन प्रभाग छ: NetEnt अनलाइन क्यासिनो, NetEnt टच र NetEnt प्रत्यक्ष क्यासिनो. NetEnt अनलाइन क्यासिनो एक खेलाडी समावेश सामान्य अनलाइन खेल को विकास र आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा चिन्तित छ. NetEnt टच मोबाइल उपकरणहरूमा पहुँच गर्न सकिन्छ खेल को विकास गर्न अनुकूल छ. NetEnt प्रत्यक्ष क्यासिनो अनलाइन क्यासिनो खेल संसारमा देशमा आधारित खेल अनुभव ल्याउन खेल विकास गरेका. प्रत्यक्ष ब्लेक2सजिलै यो वर्ग मा घोप्टो.
प्रत्यक्ष ब्लेक2प्रभावकारी इन्टरनेटमा देशमा आधारित खेल अनुभव conveys कि NetEnt देखि एक खेल हो. यो खेल संग, खेलाडीहरू अन्य खेलाडी संग कुराकानी गर्न सक्छन् र तिनीहरूले कुरा प्रत्यक्ष गरिरहेको पनि croupiers देख्न सक्नुहुन्छ.
यो के तपाईं महसुस कि आफ्नो भाग्य संग सबै भन्दा उपयुक्त हुनेछ croupier चयन गर्न मौका दिनुहुन्छ.
यो स्लट मा एक अद्वितीय सुविधा तपाईं अन्य खेलाडीहरू मा बाजी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई छ. जब तपाईं अन्य खेलाडीहरू मा बाजी थाप्न, तपाईं अझै पनि आवश्यक तालिका प्ले गरिन्थेन. अन्य खेलाडी मा एक शर्त राख्दै, आफ्नो जीत वा हानि गर्ने प्लेयर ब्लेक तालिका मा आफ्नो निर्णय बनाउँछ कसरी राम्रो द्वारा निर्णय हुनेछ.
यो गेमप्ले गर्न उत्तेजना को फराकिलो दायरा भन्छन्. यो पनि आफ्नो काँध बन्द बनाउन निर्णय दबाब टाढा लाग्छ. हुनत, तनाव एकदम बढ छ. जस्तोसुकै, यो गेमप्ले देखि धेरै रमाइलो र संभवतः थप नगद प्राप्त गर्न एउटा राम्रो तरिका हो.
सबै ramifications मा, यो खेल को डेवलपर्स आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा भेगास देखि खेल अनुभव परिवहन मा राम्रो काम गर्न. Now, अनलाइन खेल यो हुन सक्छ सबै छ.
BJ साधारण उच्च रोलर कोर्नुहोस्
प्रत्यक्ष ब्लेक मानक उच्च रोलर